Wasiirka Madaxtooyada Somaliland ayaa dareen farxad badan laha ku tilmaamay kulan khadka telefoonka uu kala qaybqatay Dadweyne Tira badan oo ku kala sugnaa dacaladda Dunida oo reer Somaliland ah.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland ayaa dareen farxad badan laha ku tilmaamay kulan khadka telefoonka uu kala qaybqatay Dadweyne Tira badan oo ku kala sugnaa dacaladda Dunida oo reer Somaliland ah. DAAWO OO DHEGAYSO KELMADIHII KULANKAS LAGA JEEDIYEY
Wasiirku waxa uu ka warramay ujeedka iyo faaidada kulankaasi xambaarsanaa, waxana warbixin uu kaga hadlayey kulankas ku baahiyey bogga uu ku leeyahay Face book iyo Bloggiisa gaarka ah
Waxay ii ahayd dareen iyo Farxad wayn in aan kummanaan Shacabka reer Somaliland ah isla markaana ku sugan daafaha dunida aan ku kulano khadka telefoonka "Teleconference" anagoo xog iyo xoog iskugu darayna Jidka Ceerigaabo iyo Burco.
Waxay ii ahayd dareen iyo Farxad wayn in aan kumanaan Shacabka reer Somaliland ah isla markaana ku sugan daafaha dunida aan ku kulano khadka telefoonka "Teleconference" anagoo xog iyo xoog iskugu darayna Jidka Ceerigaabo iyo Burco.
Waxaan si gaara uugu mahad celinayaa
Ambasador Rashid Gaaruf
Ambasador Cali Adan Awale
Sheekh Saad Muuse, oo kulanka igala qayb qaatay, waxaan sidoo kale u mahdcelinaya cid walba oo nagala qayb-qaadatay iyo sidoo kale tiradii badnayd ee khadku u soo gali waayey.
aynu xoogeena iyo xoolaheena dul dhigno hirgalinta jidka Ceeirgaabo iyo Burco.
HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKAASI.